‘कति छ सरकारी सम्पत्ति ?’ – Sandesh Munch
‘कति छ सरकारी सम्पत्ति ?’
July 24, 2020 127
काठमाडौं, साउन ८ । हरेक क्षणमा राज्य सम्पत्ति खर्च हुन्छ । कुनै विकास निर्माण, विपद् वा अन्य कुनै अवस्थामा पनि सरकारी कोषबाट खर्च हुन्छ । त्यसको प्रमुख स्रोत कर, वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण लगायतबाट हुन्छ ।
तर, देशको सार्वजनिक सम्पत्ति चाही कति होला रु छ भने कसले संरक्षण गरेको छ रु सरकारले कहाँ कति लगानी गरेको होला ? कति जग्गा सरकारी अधीनमा छ ? तर, यसको जवाफ सरकार र उसका कुनै पनि निकायसँग छैन । विगतमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकारी निकायलाई ४० पटकभन्दा बढ पत्राचार गरेपनि जवाफ पाएन् । सरकारसँग भएको कुल सम्पत्तिको अहिलेसम्म मुल्यांकन नै भएको छैन ।
पटक पटक प्रश्न उठेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेखीकरण गर्न सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेको छ । महालेखाले विद्युतीय प्रणालीमा यस्तो विवरण राख्न लागेको हो । अहिले सरकारका भिन्नाभिन्नै निकायले आफूमातहतको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ । एकीकृत रुपमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति कति, कहाँ र कुन स्वरुपमा छ भन्ने एकिन विवरण भने छैन । जसका कारण कहाँको सरकारी सम्पत्ति कति दुरुपयोग भयो भनेर सम्वन्धित कार्यालयले नभने थाहा नहुने अवस्था छ ।यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
महालेखाले बुधबारबाट भने अभिलेखीकरण राख्ने प्रणालीको शुरुवात गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बुधबार यसको उद्घाटन गर्दै यो प्रणालीले देशभरिको सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्दै यसको मूल्य, सरकारको दायित्व आदिका बारेमा पनि सूचना राखिने बताए । ‘वित्तीय व्यवस्थापन रिफर्मको यो महत्वपूर्ण कडी हो, यसले पारदर्शिता बढाउन भूमिका खेल्छ’, मैनालीले भने । उनका अनुसार, यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने जोखिम कम हुन्छ ।
कार्यालयले पहिलो चरणमा सरकारको हक, स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका जग्गा, भवन, सवारी साधन, पुल, विमानस्थल लगायतका स्थिर जिन्सी सम्पत्तिको अभिलेख तयार गर्नेछ । यस्ता सम्पत्तिको मूल्य समेत खुलाएर अभिलेखीकरण गरिनेछ । आगामी कात्तिकसम्ममा यस्तो विवरण तयार गर्ने लक्ष्य राखेको मैनालीले बताए ।
Prevनेपालकै जेठी महिलाको १ सय १४ वर्षको उमेरमा निधन
Nextधार्मिक स्थलहरु छायाँनाथ र ऋणीमोक्क्ष धाममा यो वर्ष भक्तालुहरु जान नपाउने
हेर्नुहोस आजको राशिफल : मंगलबार कुन-कुन राशिका लागि कति फलदायी ?
कुन कुन देबी देबताको फोटो र मुर्ती घरमा राख्न हुँदैन ?
भड्किलो तीजलाई को’रोनाले नियन्त्रण गर्यो